HABABKA KALA DUWAN EE BOQOSHAADA CADDAAN AH EE JIILAALKA - MOOLKA CAD
Beergooyska ee boqoshaada waa wax aan la saadaalin karin waxaana ay ku xiran tahay arrimo badan: hal xilli ciyaareed, kuwa soo iibsada musqulaha waxay keenaan baaldiyo, halka kan kale aan suurtagal ahayn in la helo mantar keli ah oo ku yaal kaynta. Sidaa darteed, sanad walba dhammaadka August - horraantii September, goosashada boqoshaada waxay bilaabmaysaa jiilaalka. Haddii aad haysato boqoshaada cad ee dayrta, waxaad horayba u hubin kartaa in aad haysato saxuun diyaar ah oo la diyaariyey ama qayb ka mid ah sheeko culus oo kale. Mushrooms waa, dabeecaddooda, badeecad aad u gaar ah, taniyo, iyo weyn, wax kasta oo dhadhan ah ayaa loo soo bandhigay saxanka, iyo weliba, ma bedelayaan qaab-dhismeedkooda iyo halbeegtooda muddada dheefshiidka.
Qalajinta boqoshaada cad
Qof kastaa wuxuu xusuustaa sida tuulada kor ku xishoodey qolofka qoyan ee boqoshaada la qalajiyey. Aabayaasheennu waxay sidoo kale ku hawlanayeen boqoshaada qalajinta jiilaalka, sababtoo ah qaab qalalan, boqoshaada waxay haysaa dhadhankooda iyo caraf udgoon. Biyo miiraha jilciya laba jibbaar: xaaladaha dabiiciga ah iyo caawinta foornada. Baro wax badan oo ku saabsan sida loo qalajiyo boqoshaada, aynu ka sii hadalno.
Ma taqaanaa? Habka qallajinta, luminta fangaska miisaanka waa qiyaastii 87-90%.
Qallajinta waa hab ku haboon dhammaan noocyada likaha, marka laga reebo kuwa leh dhadhan qadhaadh.
Sida loo qalajiyo boqoshaada porcini si dabiici ah
Haddii aad go'aansato inaad qallajiso boqoshaada si dabiici ah, ka dib marka hore waxaad u baahan tahay inaad iyaga u diyaariso, kuwaas oo: Waxaad u baahan tahay inaad kala soocdo boqoshaada mar labaad iyo caleemo qashinka wasakhda, jajabyada laamaha iyo caleemaha. Ku dhaq shisheeye uma baahnid. Waxay u baahan yihiin in la gooyo saxarada khafiifka ah oo ku saabsan 1.5 cm oo cabbir ah, hawo wanaagsan, miisaaniyada waa la qalajin karaa qorraxda furan: taas awgeed, boqoshaada waxaa lagu dhejiyaa dabaq, dusha sare ee lagu daboolay warqad ama maro, kaliya dusha birta ma shaqeyn doonto, sida likaha laga yaabo in uu hoos u dhaco iyo dubi. Qalajinta, way ka fiicantahay inaad doorato meel ka hooseysa daboolka, laakiin tani waa meesha dabayshu si fiican u garaacdo.
Haddii cimiladu aanay shaqayn, ka dibna waxaad ku qallajin kartaa boqoshaada guntanka ama barafka dhalaalaya, laakiin xusuuso inaad xirto daaqada.
Sida loo qalajiyo boqoshaada porcini iyadoo la isticmaalayo foorno
Haddii aad tahay qof deggan magaalo weyn oo aanad haysan waqti aad ku qalajiso boqoshaada dabiiciga ah, waxaana jira jidka ka baxsan: waad qallajin kartaa boqoshaada iyadoo la adeegsanayo foorno, waana wax fudud in la sameeyo. Mushrooms, kuwaas oo ku xiran qalajinta, waa la nadiifiyaa qashinka iyo wasakhda, laakiin maya maydhin, laakiin kaliya jarjar meelo burburay. Wixii qalab badan oo qalajinaya, miro miro ayaa loo kala soocaa si waafaqsan cabbirka iyo xargaha cirbadaha gaarka ah ama la dhigo waraaqda.
Waa muhiim! Marka lagu qalajiyo foornada / kariyaha, boqoshaada waa inaanay taaban midba midka kale, waana ka fiicantahay in la geliyo maaddada hal lakab.
Marka qalajinta foornada waa inay noqotaa wareegga hawada, sidoo kale waxay u baahan tahay wakhti si ay u saarto qoyaanka ka soo baxa boqoshaada. Suurtogal maaha in heerkulka sare ee isla markiiba la saaro, boqoshaada waa in marka hore la soo jiidan heerkul ah 45 darajo Haddii aad heerkulka si degdeg ah u dhigto, ka dibna walxaha borotiinka ayaa laga sii deyn doonaa boqoshaada, taas, marka, la qalajiyey, waxay ku siin doonaan hooskii madow ee boqoshaada. Heerkulka waa la kicin karaa oo keliya kaddib marka la gooyo boqoshaada si ay u dhuuntaan iyo dhoobada dusheeda, markaa heerkulka heerkulku wuxuu u kaca 75-80 digrii. Muddada nidaamka qalajinta waa mid aan suurtagal ahayn in la go'aamiyo si sax ah, iyada oo ku xidhan xajmiga boqoshaada ayaa la qalajin karaa waqtiyo kala duwan: boqoshaada horey u qalajiyey waxay u baahan yihiin in la gooyo wakhtigii loogu talagalay iyo inta soo hartay.
Sida loo soocdo boqoshaada caddaan ee jiilaalka
Salting Porcini boqoshaada waa hab aad u caan ah oo loo soo gooyo isticmaalka dheeraadka ah iyo xilliga goosashada ka dib, waxaana jira siyaabo badan iyo cuntooyin kala duwan oo loo kariyo in lakala qaado qashinka iyo sidoo kale weel kale. Mushrooms, soo go'ay by salting, waxaa loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo noocyo kala duwan ee suxuunta - laga bilaabo maraqa ilaa suugada.
Sida loo kariyo boqoshaada caano ah ee salting xilliga jiilaalka
Ka hor inta boqoshaada duuban, diyaariyo by salting qaboobaha, waxay u baahan yihiin in si taxaddar leh loo diyaariyey. Mushrooms ee salting waa in ay ahaato mid cusub oo caafimaad leh, oo aan laga saarin, oo aan lahayn farsamo. Mushrooms waa in lagu kala soocaa labo shuruudood: oo ah nooca iyo cabbirka, lugaha lugee.
Ma taqaanaa? Ka hor inta aanad saliinka iyo syroezhek u baahan tahay inaad nadiifiso maqaarka haragga.
Ka hor inta salting, raaci boqoshaada si fiican biyo qabow, iyaga oo ku ridaya weel biyo ah oo u oggolaanaya qoyaan xad dhaaf ah in ay ka baxaan. Ka dib markaad nadiifiso boqoshaada, waa in la nadiifiyaa adoo samaynaya wasakh iyo qashin, dhulka meelaha burburay waa in la gooyaa. Mushrooms waa la gooyaa marka loo eego cabbirka: weynida lakabka laftiisa, finerka waa in la gooyaa. Haddii aad go'aansato inaad cusbo cusbada, mokhoviki ama boletus, waa inaad tixgelisaa xaqiiqda ah in xitaa xiriir lala yeesho hawo gaaban oo ay hawadu ku madoobaato, taasina waxay u baahan yihiin in lagu daro cusbo iyo citric acid oo ah 10 g oo cusbo ah iyo 2 g citric acid halkii litir oo biyo ah.
Boqoshaada cagaarka saled waxay noqon kartaa dhowr siyood: qabow, kulul iyo qallalan. Aan aragno seddexdan hababkan si faahfaahsan.
Habka qabow ee salting waxaa loo isticmaali karaa marka la shaqeynayo boqoshaada kuwaas oo aan u baahnayn daaweyn kuleyl ah: boqoshaada, boqoshaada caanaha, mowjadaha, jajabyada, iwm. Marxaladda koowaad ee salting ayaa barbardhigaya boqoshaada 1-2 maalmood biyo nadiif ah, oo badanaaba la beddelo. . Boqoshaada qoyan ee biyo cusbo leh heerka heerka 10 g oo cusbo, 2 g of citric ah halkii litir oo biyo ah. Mushrooms ee lagu qooyay biyo noocaas ah waa in lagu hayaa qol qabow.
Waa muhiim! Mushrooms ee noocyada kala duwan waxay u baahan yihiin in la qooyo waqtiyo kala duwan, sidaas darteed Valui waxaa lagu qooyay 3 maalmood, boqoshaada caanaha iyo podgruzdi - 2 maalmood, iyo duufaan iyo abooro - maalin. Ryzhiki iyo roodhiga ha qoyin.
Haddii geeddi-socodka qallafsan uu kugu qaadayo waqti badan, waxaad u diyaarin kartaa barkin, sababtoo ah waxay u baahan yihiin in lagu rusheeyo biyo karkaraya iyo in ka haray dhowr daqiiqo ama ku shub biyo karkaraya. Ka bacdi ka dib, waa lagama maarmaan in la dhigo boqoshaada biyo qabow. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad ku darto boqoshaada weel ku yaal lakabyo dabool leh, ku rusheey xagga hoose ee milixda iyo rusheynta lakabka kasta oo cusbo leh. 1 kg oo ah salmon wuxuu u baahan doonaa 50 g oo cusbo ah. Mushrooms waxaa laga dhigi karaa toon, dill, basbaas, qamadi ama dhir, iyo sidoo kale isticmaalka caleemaha cherry. Weelka buuxsan waxaa lagu daboolay kanabas iyo "miisaanka miisaanka" waxaa la dhigaa dusha sare, kadibna maalin ama laba maalin kadib ayaa la geeyaa meel qabow. Dhowr maalmood ka dib, marka uu jirkoodu yar yahay, waxaad u baahan tahay inaad soo sheegto intaad awooddid inaad buuxisid weelka / keg, iyo cadaadiska dib u dhig. Sidaa darteed, ka dib wakhti ka dib weelka la buuxin doono, iyo todobaad ka dib waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in uu jiro bakteeriyada weelka, haddii kale, waxaad ku dari kartaa adoo ku dhajinaya 20 g oo cusbo ah 1 litir oo biyo ah iyo kordhinta miisaanka culeyska. Waxaad ku kaydin kartaa boqoshaada heerkul ah -1-7 digrii.
Sidee loo milixdaa boqoshaada si aad u kulul
Habka kulul ee salme gruzdey ma aha mid aad uga duwan pickling qabow, laakiin waxay u baahan tahay waqti badan. Bilow habka diyaarinta boqoshaada: waa la nadiifiyaa, maydhaa oo la qooyay ama la jarjaray, gooyay.
Waxaad u baahan tahay inaad ku shubto 0.5 litir oo biyo ah (halkii 1 kg ee boqoshaada) saxan kuugu haboon (digsi yar ama digsi) oo ku dar qanjaruufo. Markuu biyuhu baro, waxaad ku ridi kartaa boqoshaada. Iyadoo wax lagu karsado, boqoshaada waa in la kariyaa mar walba, haddii kale waxay gubi doonaan. Ka dib marka biyaha uu boogo, waa inaad ka saartaa xumbo, kudhi dhir udun si aad u dhadhamiso una kariso ilaa diyaar. Waqtiga karinta waa 10 ilaa 25 daqiiqo.
Ma taqaanaa? Diyaarinta kalluunka waxaa lagu go'aamin karaa xaqiiqda ah in ay hoos u degeen hoos, iyo brine uu noqdo mid hufan.
Boqoshaada Ready waxay u baahan tahay inay isku laabato saxan ballaaran oo ah qaboojiyaha ugu dhaqsaha badan, ka dibna ku rid dhalooyinka leh brine. Saamaynta walxaha iyo fangaska: 1 qayb oo ah brine iyo 5 qaybood oo ah boqoshaada. Waxaa suurtagal ah in la isticmaalo likaha cusbaynaya habka sida bil ah iyo badh.
Boqoshaada la qalajiyey
Marka la isticmaalo habka qalalan ee salting, boqoshaada uma baahna diyaarinta gaarka ah: waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo, la tirtiro maro jilicsan, qoyan oo aan la dhaqay. Kadibna waxaad u baahan tahay in aad jarjartid dhammaan meelaha la jajabiyey iyo jarjar boqoshaada. Mushrooms waa in lagu dhajiyaa weel si loo salting lakabyo, rusheeyo milix kasta, daboolo canavas iyo hoos u cadaadis wakiilka miisaanka, kaas oo ka samaysan wax aan awood u lahayn inuu oxidise sameeyo. Mushrooms waa la cuni karaa hal usbuuc ama hal iyo badh, marka badeecaddu diyaar u tahay, korka sare waxay noqon doontaa casiir kaas oo daboolaya boqoshaada gebi ahaanba. Habkani waxa kale oo loo yaqaan "qalalan" sababtoo ah boqoshaada uma baahna dhir udgoon dheeraad ah, sababtoo ah boqoshaada laftoodu waxay leeyihiin hodan aad u qani ah, dhadhan, dhadhan ahaan.
Waa muhiim! Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in la cusbo ma aha dhammaan boqoshaada, laakiin tiro yar oo ka mid ah noocyada, kuwaas oo, boqoshaada iyo podoreshniki.
Siyaabaha loo xakameeyo boqoshaada porcini
Xilliga qaboobaha cagaaran ayaa ah habka ugu fudud ee ugu haboon ee guriga hooyadu u goosan karto boqoshaada xilliga jiilaalka. Waxaad dhigi kartaa inta badan noocyada boqoshaada, kadibna u adeegso diyaarinta ku dhowaad saxan kasta.
Xor ka dhigo boqoshaada cad cagaaran
Xilliga jilicsan ee jiilaalka waa mid aad u fudud. Ka hor inta aanad u dirin boqoshaada qaboojiyaha, waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo lana dhaqo. Mushrooms waa la qaboojin karaa oo keliya barafaysan, haddii kale waxay isku dhafanayaan inta lagu jiro barafka. Meelaha lakabka lagu maydho oo la dhaqay waa in la gooyaa saxarada khafiifka ah ee 5-7 mm ballaaran oo lagu dhajiyay dusha sare ee habboon ee adiga kugu habboon. Foomkan, u soo dir boqoshaada qaboojiyaha. Haddii ay ku yar tahay barafeeyaha, waxaad ku dari kartaa boqoshaada qaybo yaryar ah waxayna ku qaboojinayaan bacaha khafiifka ah ee khafiifka ah ama weelasha daboolka hawada, kaas oo lagama maarmaan u ah si uusan jirku u qoynin urka alaabta kale.
Qasacado la kariyey oo la kariyey
Boqoshaada la karkariyey waxaa lagu kaydiyaa waqti dheer iyo sidoo kale, maaha wax caano ah. Waa wax fudud in la barafeeyo boqoshaada la kariyey, inkasta oo geedi socodku uu u muuqdo mid dheer. Waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in la nadiifiyo burburka ka soo baxa boqoshaada, googooyaa yar yar oo biyo raaci biyo badan. Mushrooms waa in dabka lagu shubaa dhoobo ama dheji bir ah, iyada oo aan daboolin daboolka, si aysan biyuhu u karkarin oo ha karaynin kariyahaaga.
Ka dib markii boqoshaada karkariyo, dabka waa in la yareeyaa heerka ugu hooseeya, kaas oo wali baqaya. Foomkan, boqoshaada waa in la kariyaa dhowr daqiiqo, ka dibna waxay u baahan yihiin in la miiro oo mar kale dabka ku shubo biyo nadiif ah, karkariyo illaa boqoshaada hoos ugu dhaadhacdo. Ka dibna ka saari suxuunta ka soo kulaylka iyo cadaadin boqoshaada, ha qaboobo.
Ma taqaanaa? Waxaa fiican inaad ka baxdo si ay u qaboojiso boqoshaada shaandho, kadibna waxaad xaqiijin kartaa in aysan jiri doonin qoyaan dheeraad ah ee boqoshaada.
Marka xigta, boqoshaada waxaa lagu xiraa bacaha ama weelasha, si adag u xiran, lagu calaamadiyay taariikhda qaboojinta oo loo diro qaboojiyaha.
Cuntada lakala jarjaro
Ma aha oo keliya boqoshaada cayriin ama la kariyey waxay ku habboon yihiin barafka, sidaas awgeed waa suurtogal in la fuliyo diyaarinta boqoshaada cadaan ah. Si loo qaboojiyo boqoshaada la kariyey waa mid fudud: boqoshaada waa in la nadiifiyaa qashinka, iyo subagga waa in laga saaraa maqaarka. Ka dib markaad nadiifiso boqoshaada, waxay u baahan yihiin in la gooyo qaybo ballaadhan oo dabacsan. Ku dhaji boqoshaada digsi kulul leh qadar yar oo saliid ah oo isku shiil ilaa dareeraha ka baxa. Kadibna boqoshaada waa in laga saaraa kulaylka oo sug ilaa qabow. Boqoshaada qabow waa in lagu xiraa bacaha ama weelka, si adag u xiran oo loo diro barafeeyaha.
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo dhadhanka dhadhanka ah iyo urta, waxaa lagama maarmaan ah in la dubo boqoshaada foornada iyada oo aan saliid ah kahor inta aan la qaboojin.
Boqoshaada la soo gooyay waxaa lagu keydin karaa heerkul aan ka hoosayn -18 digrii isla markiiba waxaa lagu daaweeyaa kuleylka daaweynta ka dib markii la jarayo.
Marineynta boqoshaada caddaan
Hooyo kasta oo ugu yaraan hal mar ah boqoshaada la kariyey, oo lagu daboolay jiilaalka, mid walbana wuxuu leeyahay cuntooyin gaar ah. Tani waa habka ugu caansan ee diyaarinta, taas oo markaa loo isticmaali karo diyaarinta suxuunta kale ama saxan gooni ah. Musqusha iyo shimbiraha waxay ku habboon yihiin marinating, way ka adag yihiin dhismaha marka loo eego kuwa kale, da'yar, waa in aan la isticmaalin boqoshaada. Ka hor inta aan la gaynin boqoshaada xilliga qaboobaha, waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo, jarjar meelaha harroodka ah iyo raaci. Boqoshaada waaweyn waxay u baahanyihiin in la kala qaybiyo loona kala qaado kabaha iyo lugaha si gaar ah. Su'aalaha sida badan loo waydiiyo: sida loo soocayo boqoshaada barafaysan ee barafaysan. Jawaabtu waa sahlan: si kastaba ha ahaatee, waa in marka hore la tirtiro, "la tuuro" oo lagu daaweeyaa kulaylka: boogaha ama isku kari ilaa dhowr daqiiqo biyo karkaraya.
Sidaa daraadeed boqoshaada oo aan madow lahayn, waa la xiri karaa xal milix iyo citric acid ah, laakiin ka hor inta aan wax lagu karin karin laftooda waxay u baahan doonaan in la dhaqo.
Waxaa jira laba siyaabood oo lagu kariyo boqoshaada marinade: ku karkaree boqoshaada marinade ee saxan isku mid ah, waxay siin doontaa dhadhan qani ah iyo urin, laakiin muuqaalka muuqaalka marinade ma noqon karo midka ugu fiicnaa, waxay noqon doontaa madow, dhajisan, oo leh qaybo boqoshaada ah. Habka labaad waa in la karkariyo boqoshaada iyo marinade si gooni gooni ah, ka dibna marka marxaladda marinnada dhalaalayso, isku dar labada qaybood. Xaaladdan, adigu ma gaari kartid dhadhan qaas ah iyo midab leh, laakiin ilaali muuqaal quruxda leh ee boqoshaada shaqada marinade. Alaabta la dhamaystiray waa in lagu shubaa weelasha la nadiifiyo oo lagu xiro furayaasha nadiifka ah - tani waxay kaa caawineysaa in laga fogaado botulism. Iyadoo isbedelka ugu yar ee foomka boqoshaada ka soo weelka sida ka fiican in laga takhaluso, si aanay u sun ah.
Sida aad u arki karto, u diyaari boqoshaada si fudud oo jaban. Ku filan inaad waqti wakhti yar ku qaadato jikada si aad naftaada iyo kuwa aad jeceshahay ugu cuntid suugo macaan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Moolka cad 2020